Olga Tokarczuk: ndiani iye, akadii peni yake uye akaburitsa mabhuku | Zvazvino Zvinyorwa
Wakambonzwa nezve Olga Tokarczuk? Uyu munyori anokunda Nobel haana kuzivikanwa kuSpain. Nekudaro, kubva zvaakagashira iyo Nobel Prize yeMabhuku muna2018, vaparidzi vakamuona. Nekudaro, haazi ese mabhuku aakanyora asvika kuSpain parizvino, uye isu tinofanirwa kugadzirisa kungoteedzera peni yake, izvo zvinosiya vaverengi vese vachida zvimwe.
Kana iwe uchida kusvika pakuziva Olga Tokarczuk zvishoma padhuze, kuti uzive kuti iye ndiani, anonyora sei uye mabhuku aunowana nezve iye munyori, usapotsa ichi chinyorwa umo isu takaunganidza zvese zviripo ruzivo nezve iye munyori.
1 Olga Tokarczuk ndiani
2 Chinyoreso chake
3 Mabhuku aOlga Tokarczuk
3.1 Pamapfupa evakafa
3.2 Mweya wakarasika
3.3 Iyo Wanderers
3.4 Olga Tokarczuk: Nzvimbo inonzi Yekare
Olga Tokarczuk ndiani
Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kuziva zvishoma Olga Tokarczuk. Uyu munyori uye munyori wenyaya ndewekutanga kwePoland. Peni yake haina kunyatsovakirwa pamanovhosi chete, asi yakagadzirawo nhanho, nhetembo uye kunyangwe psychology.
Akazvarwa muPoland, kunyanya muSulejów, mu1962 uye zvese paudiki hwake nekuyaruka zvakashandiswa muKietrz, taundi rekumaruwa rinogumira Czechoslovakia (yaive nzvimbo iyoyo panguva iyoyo). Zvidzidzo zvake zvaive zvisina hukama nemabhuku, asi asi akadzidza psychology kuYunivhesiti yeWarsaw. Muchokwadi, paaidzidza, aishanda kumakiriniki ehutano hwepfungwa, basa raakachengeta mushure mekupedza kudzidza.
Zvisinei, chii zvakasanganiswa nemabhuku, uye panguva imwechete aive nehukama hwehukama hwebasa, akaburitsa zvinyorwa zvake. Kusvikira mabhuku ake amupa mukurumbira wakadai zvekuti aigona kuita pasina basa kuzvipira iye ega kune zvinyorwa. Parizvino, iye anosanganisa zvese kugadzirwa kwemabhuku ake uye kuitirwa mashopu uye makosi ekunyora (anoatora kuJangiellonian University yeKrakow).
La Nyaya yekutanga yaOlga Tokarczuk yakatangwa muna 1979 mumagazini yeNa przelaj, vateereri vechidiki. Zvisinei, haana kuzviita nezita rake chairo, asi akatarisa zita rekunyepedzera, ndokusaina saNasza Borodin.
Zvakatora makore akati wandei, muna1993, akaburitsa bhuku rake rekutanga, Rwendo rweBhuku Varume, nyaya yaakatambira Mubayiro wePolish Association yeMabhuku Vaparidzi. Makore maviri gare gare, akaburitsa EE, inoshamisa yemhando yenyaya. Muna 1996, bhuku rake rechitatu, Munzvimbo inonzi yesteryear, akagamuchira mubairo wake wechipiri, iyo Nike Literary Award Vateereri Mubairo. Kubva pane izvi, Olga Tokarczuk akatanga kuburitsa rinenge gore rega rega, achigadzwa kana kuhwina mibairo yakati wandei yenyaya dzake. Asi chinonyanya kukosha pane zvese chakauya kwaari muna 2019, uko kwakaziviswa kuti Olga Tokarczuk ndiye akahwina mubairo weNobel Prize muna Zvinyorwa (zvakaziviswa gore rakatevera nekuda kwematambudziko emukati musangano)
Avo vakaverenga basa rake, kwete chete mabhuku echiSpanish, asi mazhinji emamwe mabhuku ake, funga nezvaTokarczuk kuti iye munyori ane literary maitiro uye 'epakutanga' mafungiro, Izvo hazvina chekuita nevamwe vanyori. Mumabhuku ake anokwanisa kutsanangura vatambi kwete kwete panyama chete, asi zvakare nezvepfungwa, achivasvika nenzira inoita seinovasundira mukati kuti avaratidze nesimba ravo uye nekushaya kwavo kuvaverengi.
Mukuwedzera, inopa makakatanwa anobva pane zvinopesana: zvakasikwa zvichipesana netsika, chikonzero kupokana neupengo ...
Mumashoko emunyori pachake, "Ini ndinorondedzera nenzira yemahara iyo, ndinovimba, inokurudzira muverengi." Uye ndezvekuti izvo izvo Olga Tokarczuk anotarisira hazvisi zvekuvaraidza muverengi, asi kumupa hwaro kuti iye pachake afunge nezve izvo zvakasimudzwa mumanovel.
Mabhuku aOlga Tokarczuk
Sezvatakambotaura, kuSpain haazi ese mabhuku emunyori aya anogona kududzirwa. Muchokwadi, pane mashoma kwazvo akashandurwa, asi muchokwadi Olga Tokarczuk akawedzera maererano nemanoveli nenyaya. Chinyorwa chemabhuku ake ese chinotevera:
Guta mumagirazi (Miasto w lustrach) (1989) - nhetembo.
Rwendo rwevarume veBhuku (Podróż ludzi Księgi) (1993).
Nzvimbo inonzi yesteryear (Prawiek i zvisina basa czasy), (1996).
Muvharobhu (Szafa), 1997.
Masikati Imba, Nighttime Imba (Dom dzienny, dom nocny), 1998.
Nhau dzeKisimusi (Opowieści wigilijne) (2000) - pamwe naJerzy Pilch naAndrzej Stasiuk.
Chidhori neparera (Lalka i perła) (2000).
Konzati yemadhiramu akasiyana (Gra na wielu bębenkach), 2001.
Nhau dzekupedzisira (Ostatnie nhoroondo), 2004.
Anna Mumakuva enyika (Anna In w grobowcach świata) (2006).
Los errantes (Bieguni) (2007) - 2008 Nike Literary Mubairo unokunda bhuku.
Pamapfupa evakafa (Prowadź swój pług przez kości umarłych) (2009).
Iyo nguva yebere (Moment niedźwiedzia) (2012), zvinyorwa zvakatangirwa nesumo naKinga Dunin.
Mabhuku aJacob (Księgi Jakubowe) (2014), nhoroondo yenhau yekuhwina iyo 2015 Nike Literary Award.
Wakarasika mweya (Zgubiona dusza), 2017.
Dzinoshamisa ngano (Opowiadania bizarne). Krakow, Literary Kuburitsa, 2018.
Pakati pavo vese, iwo aunogona kuwana muSpain muSpanish anotevera:
Kubva kune inonakidza genre, inosanganisa nyaya izere nezvakavanzika nezvinoshamisa. Mariri iwe une protagonist mukadzi akwegura, anogara ega mutaundi diki uye anodzidzisa Chirungu muchikoro chidiki. Nekudaro, kuwanikwa kwemuvakidzani anoonekwa aine mhembwe bhonzo rakanamatira pahuro pake kunoita kuti afarire nyaya iyi uye otenda kuti anogona kuona zviri kuitika.
Zvisinei, mapurisa, pamwe nevavakidzani vake, vanomuona se "chembere inopenga" uye anofanirwa kutora matanho kuitira kuti atungamire nyaya iyi.
Ndicho rine mifananidzo bhuku umo, ine mifananidzo inokwezva kutarisisa, munyori anopa nyaya pfupi, nyaya dzine hunhu (dzimwe nguva dzakaoma kunzwisisa), uye fungidziro dzinozoita kuti unetseke kuti hupenyu hwaunorarama ndihwo chaihwo hunokuita kuti ufare.
Mubhuku rino naOlga Tokarczuk iwe unowana nyika isina kubatana, chaizvo akati wandei. Sezvineiwo vanonyanya kutaurwa; uchave nemurume akafirwa nemukadzi nemwanakomana, mutero wemutero kana mukadzi anoda kuona rudo rwake rwekutanga zvakare. Asi, pamusoro pezvo, kune mareferenzi kune mamwe mavara.
Avo vakamboiverenga vanoti ndiyo yakanakisa yemunyori.
Olga Tokarczuk: Nzvimbo inonzi Yekare
Yekupedzisira emabhuku aOlga Tokarczuk aunogona kuwana muchiSpanish ndeiyi, Nzvimbo inonzi Antaño. Tiudze nhoroondo yeguta nevagari vanogara mariri. Hondo, hushamwari, chisimba, kupandukira uye kufamba kwenguva kunoita kuti vapikisi vashanduke, vachinje uye voita kuti muverengi azive nezvemaitiro aya, pamwe nemanzwiro anotonga hupenyu hwevanhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Olga Tokarczuk
Akanakisa Stephen King mabhuku